मालिन्दो एयर ठुलो दुर्घटनाबाट बच्यो, कस्तो जहाजमा बढि जोखिम ?
काठमाडौं/बैशाख ७ । बिहिबार राती १०ः०७ मा मालिन्दो एयरको जहाज टेक अफ गर्ने क्रममा अनियन्त्रीत भएर रनवे को ट्रयाक छोड्दै घाँसे मैदानमा पुगेपछि ठुलो दुर्घटनाको जोखिममा परेको थियो । १३९ जना यात्रु रहेको जहाज ठुलो दुर्घटना हुनु अघि पाइलट र क्रु मेम्बरले नियन्त्रीत गर्न सफल भएपछि ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको थियो ।
उक्त बोइङ ७३७–९०० इआर जहाज चिप्लीएपछि तत्कालै यात्रुहरु र क्रु मेम्बरहरुको तत्कालै उद्धार गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवत्ता प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिए । मलेशियाको बजेट एयरलायन्स मालिन्दोले क्वाला लुम्पुरबाट काठमाडौंको लागि दैनिक दुई उडान भर्दै आएको छ ।
सो घटना पछि विमानस्थल बन्द भइ त्यसपछिका ल्याण्डीङ र टेक अफ प्रभावित भएको छ । डोमेस्टीक फ्लाइटहरु शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि चलेपनि अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ १२ बजेपछि मात्रै चल्ने जानकारी आएको छ । हाल उक्त जहाजलाई शकुशल पार्किङ लटमा ल्याउनको लागि सुरक्षा फौज र एयरपोर्ट कर्मचारी परिचालन भएका छन् ।
कस्ता जहाजमा दुर्घटनाको बढि जोखिम ?
सबै बजेट एयरलायन्समा यस्तो समस्या भएको देखिंदैन । एयर अरेबिया र फ्लाइ दुबई जस्ता बजेट एयरलायन्स सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागी प्रख्यात छन् । भारतको एयर इन्डीगोले समयमै फ्लाइट उडाउन (इन टाइम फ्लाइट) मा अब्बल भै उपाधि नै पाइरहेको छ । यद्यपी कतिपय एयरलायन्सले नाफालाई प्रमुख बनाउने नेपाल जस्तो पहाडी भेगभएको क्षेत्रमा आवश्यक सतर्कता नअपनाउनाले यात्रुहरु यस्ता दुर्घटनाको जोखिम बढेको यस क्षेत्रका विश्लेषकहरु बताउँछन् । तस्वीरः निरन्जन श्रेष्ठ/एपी
२०७५ बैशाख ७ शुक्रबार ११:३४:०० मा प्रकाशित